အရမ်းအရမ်းလန်းတဲ့ Samsung Lucky Draw Promo ~ The ICT.com.mm Blog
အရမ်းအရမ်းလန်းတဲ့ Samsung Lucky Draw Promo
Samsung ရဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက်တွေကို ဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ Customer တွေအတွက် ဆုမဲပေါင်း(၃၀၀)ကျော် ကံထူးနိုင်တဲ့ Lucky Draw Promotion လေးရှိပါတယ်။ Samsung စမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေကို ဒီ Lucky Draw Promotion ကာလမှာဝယ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူသည့်တန်ဖိုးအလိုက် Lucky Draw ကံစမ်းမဲကူပွန်လေးတွေကို ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမှာပါ။
Lucky Draw Promotion မှာမဲဖောက်ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့
1. 82” Crystal UHD 4K TV ——- (1)လုံး
2. 75” Crystal UHD 4K TV ——- (2)လုံး
3. Side by Side Refrigerator —- (5)လုံး
4. Washing Machine ————– (10)လုံး
5. 32” TV ——————————— (150)လုံး
6. Galaxy Buds ———————– (150)ခု
(18 Nov 2021 မှ4Jan 2022 အတွင်း) Samsung စမတ်ဖုန်း (Smartphone) နဲ့ တက်ဘလက် (Tablet) ဝယ်ယူသူများ
အရမ်းမိုက်တဲ့ဆုတွေချည်းပဲဆိုတော့ ဖုန်းအသစ်လေးလည်းလဲရင်း ကံစမ်းကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ Samsung စမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေကို အလွယ်တကူရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အောက်မှာ သီးသန့်လင့်ခ်လေးလည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
#ShopICT #Myanmar #Samsung #Smartphone #Tablet #luckydraw #promotion
Newer မီးပြတ်တဲ့အခါ Wifi တွေကို ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Wifi သုံး UPS ဖြစ်တဲ့ MINI DC UPS လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။
Older iPhone 13 ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရောင်မရလို့ စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။